Mampatavy ny tsy fikotranana
Mampatavy ny tsy fanaovana fanatanjahantena
Ny ankabeazantsika rehetra dia tsy manao fanatanjahantena. Mba tsy hanaovana izany, miteny ny sasany fa : « Tsy manam-potoana hanaovana fanatanjahantena », ary ny hafa indray hiteny hoe : « Tsy tia fanatanjahantena ».
Samy manana 24 ora avy isika isan’andro mba hanatontosantsika ny adidy aman’andraikitra tokony hataontsika. Ny mampiavaka antsika amin’ny Einstein sy Mère Theresa dia ny fampiasantsika ireny 24 ora ireny. Tsinjaraintsika amin’ny rehetra izay manan-danja ireo 24 ora ireo. Noho izany, manokana fotoana ho an’izay rehetra manan-danja ho antsika isika : ny asantsika, ny fianarana, ny zanaka, ny fanambadiana, ny fianakaviana, ny tantara mitohy ankafizintsika, ny fanoratana matetika ao amin’ny réseaux sociaux (facebook, instagram, twitter, snapchat, …), ny kilalao ankafizintsika (candy crush, zumba deluxe, dota 2, …), … Rehefa miteny izany isika hoe « Tsy manam-potoana hanaovana fanatanjahantena » dia midika hoe : « Tsy manan-danja ho ahy ny fanatanjahantena ». Mahita fotoana foana isika hanaovana izay manan-danja ho antsika. Ohatra : fa maninona ianao no afaka manao facebook ? Nefa raha tsy manan-danja ho anao ny fanatanjahantena dia mihomana ny hatavy na harary.
Tsaroako aho niteny tamin’ny mpampianatro marketing tamin’ny 3ème année hoe : « Tsy tia fanatanjahantena aho ». Nefa notohizako hoe : « Tiako be ny milomano ». Dia namaly ahy daholo ny iray kilasy hoe : « Fanatanjahantena anie ny milomano e ! ». Ie, nefa ho ahy, ny fanatanjahantena dia ny mihazakazaka ihany.
Noho izany, rehefa miteny isika hoe : « Tsy tia fanatanjahantena aho », ny tiantsika tenenina amin’izany dia : « Tsy tiako ilay heveriko hoe fanatanjahantena ». Ny heveriko hoe fanatanjahantena dia mety ho ny mihazakazaka na jogging ihany, na zumba, na milomano, na basket, na foot, na rugby, na handball, na hay ady, na fitness, na yoga, … Hitanao ve fa mety ho maro be ny atao hoe fanatanjahantena ?
Hadihadio ny fotoana hanananao sy ny fanatanjahantena tianao
Mandritra ny herinandro iray, raiso an-tsoratra ny toatalin’ny ora izay hijerevanao fahitalavitra, hanaovanao facebook, hilalaovanao jeux vidéos (candy crush, flappy bird, dota 2 …), hamakianao boky, hamakianao zavatra amin’ny internet, hamakianao gazety, hiantsenanao, … Ary kajikajio hoe firy ny toatalin’ny ora izay hahafahanao manao zavatra ao anatin’ny andro iray sy ao anatin’ny herinandro iray. Raha ny hevitrao, tena mino marina ve ianao fa tsy manana fotoana mihitsy hanaovana fanatanjahantena ?
Mangalà taratasy iray ary zarao tabilao roa. Ao amin’ny tabilao voalohany, tanisao ny fanatanjahantena rehetra izay tsy tianao. Ary ao amin’ny tabilao faharoa, ireo rehetra izay tianao. Oh : mihazakazaka na jogging, mandeha togotra na mandehandeha, milomano, EPS, zumba na mandihy, basket, tennis, foot, handball, rugby, tennis de table, pétanque, atletisma (saut en hauteur, en longueur, …), gymnastique (roulades, …), hay ady (karaté, tae kwan do, judo, …), fitness (squat, lunges na pas de géant, …), tsipi-tady, hula hoop, pilates, yoga, mikotrana amin’ny poids, … Betsaka no azo tanisaina.
Efa fantatrao daholo amin'izay izao ny antony mampatavy rehetra, azonao atao amin'izay ny mianatra ny vahaolana izay mampihena na mampahia.
Tsindrio eto amin'ito sary ito raha te hahita ny vahaolana mampahia na mampihena ianao.